Mirror Mac skrini kune Smart TV | Ndinobva mac
Mirror Mac Screen kune Smart TV
Jose Alfocea | | Zvimwe Zvirongwa zveMac, Tutorials
Unoda here girazi Mac skrini kune Smart TV? Kunyange chiri chokwadi kuti kusvika parizvino zvaibvira kubatanidza iyo OS X sisitimu inoshanda neako Samsung Smart Tv uchishandisa AirPlay tekinoroji kubva kuApple zvishandiso, kuti zviite izvo zvaidikanwa kuve neApple TV.
Neichi chishandiso chitsva zvichave zvinogoneka girazi Mac OS X skrini uye uone iyo system kuburikidza inoenderana Samsung Smart TV, ichiita yakapusa kumisikidza uye kubatanidza iyo michina miviri kune imwechete network.
AirPlay inoita kuti vashandisi vakurumidze kubata uye vagovane ese mimhanzi, mapikicha uye mavhidhiyo mafaira zvisina waya pakati pemidziyo, inoyerera mimhanzi kune Airport Express, uye magirazi skrini kusvika ikozvino kuburikidza neApple TV
1 Wana zvakanakira AirPlay pane yako Smart TV
2 Uchishandisa Apple TV + AirPlay
4 Uchishandisa Google Chromecast
Wana zvakanakira AirPlay pane yako Smart TV
Iyo yekuvandudza AirBeamTV BV yakaparura Mirror yeSamsung TV, iyo yave kuwanikwa muApp Store, kuti iite mirroring isina Apple TV. Kana iwe uine Samsung Smart TV kubva 2012 kana gare gare uye Mac OS X 10.10, iwe unozokwanisa kushandisa Mirror yeSamsoni ine huwandu hwakawanda.
Iwe unozongofanira kubatanidza iwo maviri majairaiwe kune imwechete wifi network uye sisMusoro unozotsvaga wega Smart TV. Kamwe yawanikwa mu runyorwa rwezvigadzirwa zvakabatanaAll iwe kuita kuita kusarudza izvozvo uye kutanga mirroring rikurumidze. Vagadziri vacho vanoyambira kuti panogona kunge paine kunonoka kwemasekonzi matatu uye, kana iri nguva yakareba, vanokurudzira kushandura compression ratio yemufananidzo.
Fomati pendrive neFAT kana exFAT system
Mirror ye Samsung TV inobvumidza iwe kusarudza iyo tarisa kuratidza yakabatana neMac yako uye sarudza odhiyo sosi: inoburitsa ruzha kubva kumakomputa kana kuburikidza nevatauri veiyo Smart TV.
AirBeamTV BV inotipa iyo a free download uye nekukurumidza muyedzo vhezheni yatinogona kushandisa kwemaminetsi maviri, yakakwana nguva yekutarisa kunyaradza uye kushanda kwekushandisa kwayo. Iyo yakazara vhezheni iri paApp Store ye € 9,99 asi iri sarudzo yakakurudzirwa kwazvo ye girazi Mac skrini kune Smart TV kubva kuSamsung.
Mirror yeSamsung TV9,99 €
Uchishandisa Apple TV + AirPlay
Kana yako Smart TV isingaenderane zvakananga neApple yeApple tekinoroji kana iwe uchingova neyakajairika isiri- "smart" terevhizheni, imwe fomula iyo inokutendera iwe kutevedzera chidzitiro cheMac yako paterevhizheni yako shandisa Apple TV.
Unogona kushandisa chero Apple TV chechipiri, chechitatu kana chechina chizvarwa, zvine mukana wekuti mbiri dzekutanga dzinogona kuwanikwa nemutengo wakanaka kwazvo pamusika wechipiri-ruoko.
Kana uchinge wave neApple TV yako, unofanira kungoita batanidza ne HDMI tambo kuTV yako uye ita shuwa kuti iri pasi peiyo imwecheteyo network yeWiFiyo yako Mac yakabatana.
Tevere, tinya pane iyo AirPlay chiratidzo chiri mune menyu bar yeMac yako, sarudza yako Apple TV uye, nekukasira, komputa yako ichaonekwa yakakura pane yako terevhizheni.
Gadzirisa 'kamera isina kubatana' kukanganisa muOS X
Kana iwe uchinge uchiona vhidhiyo kubva kuYouTube, A3Player, Mitele, Netflix kana chero imwe sevhisi, zvingangoita kuti chiratidzo cheAirPlay chionekwe muhwindo rekutamba. Dhinda iyo, sarudza yako Apple TV, uye vhidhiyo inoyerera ichienda kuTV yako. Panguva ino, unogona kuenderera mberi nekushandisa Mac yako senguva dzose.
Takataura nezve "Mirror ye Samsung TV", uye zvakare nezve sarudzo yekubatanidza AirPlay neApple TV, asi pane zvimwe zvingasarudzwa, semuenzaniso, AirParrot 2.
AirParrot ndicho chishandiso yakanaka kune avo vane yavo yekare Mac komputa isingatsigire tekinoroji yeAirPlay. Neichi chishandiso unogona kudzokorora skrini ye Mac yako paTV yako, wedzera chidzitiro cheMac yako, tumira vhidhiyo kuti uione pachiratidziro chikuru, uye kunyangwe kuteedzera zvinoshandiswa zvakasiyana.
Imwe mukana weAirParrot 2 ndeyekuti Unogona kuishandisa nezvose zviri zviviri Apple TV uye chishandiso cheChromecast kana neAirPlay inoenderana maspika kutumira mimhanzi yako. Uye, pamusoro pezvo, inoendesa kusvika pa1080p mhando uye unogona kuisanganisa panguva imwe chete kune vanoverengeka vanogamuchira.
Uye kana iwe usina chokwadi chaizvo kuti iyi ndiyo mhinduro yaunoda, unogona dhawunorodha yemahara mazuva manomwe-muyedzo vhezheni pano, uye wobva wafunga kuti wotenga kana kwete.
Uchishandisa Google Chromecast
Imwe nzira iyo iwe yaunogona kuwedzera iyo desktop yeMac yako kana kuteedzera skrini yeMac yako kuterevhizheni yako kana yekutarisa kwekunze, iri kuburikidza neGoogle Chromecast chishandiso chakabatanidzwa neAir Parrot app izvo zvatichangobva kuona zvakadzama.
Kana iwe uine yekare Mac komputa iyo isina AirPlay tekinoroji rutsigiro, Musanganiswa uyu unenge wakachipa kupfuura huwandu hweApple TV + Mhepo Parrot 2 Kunyangwe, hongu, iwe uchiziva kuti hapana chinonzwisiswa zvirinani neApple chishandiso pane imwe Apple chishandiso.
Google Chromecast, ...
Izvo zvakati, zvese zvaunoda kutenga Google Chromecast chishandiso uye nekuibatanidza kuTV yako uye kune imwecheteyo yeWi-Fi network iyo komputa yako iri pasi. Kana izvi zvangoitwa, iwe unotoziva mashandiro anoita Air Parrot 2: tinya iyo icon mune menyu bar yeMac yako, sarudza yako Chromecast chishandiso uye iwe unogona kuwedzera chidzitiro cheMac yako, kuidzokorora kana kutumira chairo application kana chete odhiyo .
Uye tinopedzisa ne Serviio, yekutenda kunyorera kwauchazokwanisa goverana zvemukati nemamwe madivayiri akabatanidzwa kune imwecheteyo network kuitira kuti kana uine mafirimu, akateedzana, mapikicha, mumhanzi uye zvimwe paMac yako, unogona kuzviridza pa Smart TV yako pasina kudikanwa kwetambo. Musiyano mukuru ndewekuti neapp iyi haugone kuteedzera skrini yeMac yako paterevhizheni yako, asi kutumira zvirimo, asi kana izvi ndizvo zvawanga uchitsvaga, ipapo zvichave zvakanaka nekuti hauzodi Apple TV, Chromecast kana AirPlay, chete ichi Anwendung kuti unogona kurodha pasi kubva kune yayo yepamutemo webhusaiti uye uishandise semuedzo wepachena kwemazuva gumi nemashanu ...
Kana rimwe zuva Apple ikasarudza kuvhura yayo TV, zvingangoita kuti isu tinogona kuteedzera skrini yeMac yedu zvakanyanya nyore uye pasina zvinoenderana nezvishongedzo kana yechitatu-bato maapplication, zvese zviri nyore, hongu, iwe unoziva kuti kana vamwe zuva iro chigadzirwa ichi chakatangwa, hachizove zvakachipa materevhizheni uye isu tichafanirwa kuita zvekumanikidza mari yakawanda nekuda kwayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac zvirongwa » Zvimwe Zvirongwa zveMac » Mirror Mac Screen kune Smart TV
Inonakidza, kana LG ichicherekedza uye inotipa kushamisika
Pakupedzisira chimwe chinhu chinoshanda muSansumg yangu !!!! Iyo yakakosha chaizvo uye iri kufamba mushe, ini ndashandisa iyo yekuyedza vhezheni uye ini ndato kukuudza iwe kuti ndeye yakasarudzika, saka kana kurira kwacho kukanzwika paTV unofanirwa kuisa plugin, AirBeamTV, uye mushure meizvozvo iwe Unogona kuteerera TV pasina matambudziko !! Anonakidza !!!
Ini ndinofanirwa kutaura kuti yakanonoka pakati pekombuta neTV sezvo mushambadzi atozvitaura, asi hachisi chinhu chinondinetsa, saka unenge uine nguva yekurara pamubhedha, hahahaha.
Ndiri kuenda kunotenga izvozvi. Kutenda neiyo SOYDEMAC chiziviso.
PS: Yangu TV iSansumg UE46D6100 uye kana ndikarangarira nemazvo, zviri pamberi pa2012.
Pindura kuna juancagr
@juancagr waiwana kupi iyo yekuyedza vhezheni? Ndinoda kuzviedza.
Marcelo campusano akadaro
yakapusa: shandisa Vuze (DLNA Server)
Pindura Marcelo Campusano
fer rivera akadaro
mac mac angu asati asangana ne hdmi kubva kutinhira. ikozvino hazviite ... zvingave zviri nekuda kweayo matsva ekubhadhara maapps ????
Vlvaro Marín Ordóñez akadaro
Pindura kuna Elvaro Marín Ordóñez
Kana iwe uchida chiteshi cheHDMI pane yako 12-inch MacBook, heino imwezve sarudzo
Chinja mafaera ePDF kuita zvemukati zvine simba neFlip PDF yeMac